कर्पोरेट Archives - Page3of 21 - Arthakoartha.com - Arthakoartha.com
३ असार २०७५, आईतवार ०१:५० अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, ३ असार । युनाईटेड इन्स्योरेन्सको संचालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालको राजिनामा स्विकृत गरेको छ । उनले दिएको राजिनामा असार ४ गतेबाट लागु भएको छ । बरालको राजिनामा स्विकृतीसंगै कम्पनीको नायब महाप्रबन्धक रमेश कुमार भट्टराईलाई कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको जानकारी दिइएको छ । भट्टराईलाई अर्काे व्यवस्था लागु नभएसम्म सो पदमा […]
३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार २३:४७ अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, १ असार । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र बयोधा हस्पिटल प्रा.लि. बिच सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका नायव महाप्रबन्धक पवन थापा र बयोधा हस्पिटलका महाप्रबन्धक राजीभ चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडबाट औषधोपचार बीमा सेवा खरिद गर्ने ग्राहकहरुको बीमालेखको […]
३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०२:२८ अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, ३१ जेठ । आइएमई १७ औं वर्ष पार गरेर १८ औंं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थापनाकालदेखि नै साझेदारी व्यवसायलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आएको आइएमईले १८औं वर्षसम्मको व्यावसायिक यात्रामा देशभित्र करिव २० हजार व्यावसायिक साझेदारहरूको साझा संजाल निर्माण गरेको छ त्यसैले ‘८ औं वार्षिकोत्सव साझेदारीको’ भन्ने मूलनाराका साथ यसपटकको वार्षिकोत्सव मनाइएको हो । १८ […]
३० जेष्ठ २०७५, बुधबार ०२:२७ अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, ३० जेठ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, भैसेपाटी बिच बैंकका ग्राहकवर्गलाई अस्पतालको सेवा शुल्कमा विशेष छुट दिने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अस्पतालका अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोको उपस्थितिमा आयोजित उक्त समारोहमा बैंकका तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेल र अस्पतालका तर्फबाट जनरल म्यानेजर विजय रिमालले हस्ताक्षर गर्नु भएको […]
२९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०१:०० अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, २९ जेठ । एनएमबी बैंकले भोलिदेखि थप निष्काशन (एफपीओ) गर्ने भएको छ । बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पु¥याउन प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ बिक्री गर्न लागेको हो । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । बैंकले प्रमियम मूल्यमा […]